उपहार दिने एकसिंगे गैँडा खोजी गर्दै चिनियाँसहित नेपाली विज्ञ - Naya Patrika
चीनलाई उपहार दिने दुई जोडी एकसिंगे गैंडाको खोजी प्रक्रिया सुरु भएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चिनियाँसहित नेपाली विज्ञहरूले गत बिहीबारदेखि बिहानदेखि बेलुकासम्म गैँडाको खोजी जारी राखेका छन् । आगामी एक हप्ताभित्र उपहार दिने गैँडा छोपेर बोमा राखिने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिए ।
‘चीनलाई उपहार दिने एकदेखि दुई वर्षसम्मका गैँडा निकुञ्ज क्षेत्रमा खोजीलाई तीव्रता दिएका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कम उमेरको गैँडा भएमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सजिलो हुन्छ ।’ हप्ता दिनभित्र गैँडा फेला पारेर बोमा राख्ने गरी खोजीकार्य जारी राखिएको उनले बताए । पहिलो चरणमा एक जोडी केटाकेटी खोजी गरेपछि मात्र अर्को जोडी केटाकेटी खोजीकार्यलाई तीव्रता दिने उनको भनाइ छ ।
गैँडा राख्न सौराहामा दुई प्रकारका बोमा तयार गरिएको छ । ‘एउटा सानो खालको बोमा चारदेखि पाँच मिटर लम्बाइ, चौडाइ र गहिराइ बनाइएको छ । त्यो बोमामा गैँडालाई एक महिनासम्म पानीसहित घाँसलगायतका खाना दिन्छौँ,’ कँडेलले भने, ‘एक महिनापछि आठ फिट अग्लो ढलान गरी बनाएको बोमा दुई महिनासम्म गैँडालाई राख्छौँ ।’ यसरी बोमा राखिएपछि गैँडालाई चीन लैजान सजिलो हुने उनले बताए ।
कुन देशलाई कति गैँडा उपहार दिइयो ?
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार नेपालले धेरै देशलाई गैँडा उपहार दिइसकेको छ । नेपालले पनि आफ्नो देशमा नपाइने जंगली जनावर विदेशबाट उपहार ल्याउने गरेको छ । नेपालले अहिलेसम्म आठ देशलाई गैँडा उपहार दिइसकेको छ ।
असारमा चीनलाई गैँडा हस्तान्तरण गर्ने तयारी
नेपाल सरकारले आगामी असारमा चीनलाई गैँडा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । गैँडा राख्ने विशेष प्रकारका खोरसमेत तयार गरिसकिएको छ । चितवनबाट गैँडा काठमाडौ ल्याएर विमानमा राखेर चीन पुर्‍याइने भएको छ । तीन महिनासम्म बोमा राखेर खाना खुवाएपछि गैडालाई चीन पुर्‍याउन सजिलो हुने भएकाले यस्तो गरिएको हो । चीनको चिमे लङ सफारी पार्कका सहायक प्रबन्धक याङ गत ६ वैशाखमा चितवन आइपुगेका थिए । उनी अझै एक हप्ता बसेर स्वदेश फर्किने भएका छन् । याङले गैँडाको खाना, वासस्थानसबन्धी विषयमा चितवनमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
गैँडा दिने निर्णय कहिले भयो ?
तत्कालीन वनमन्त्री अग्नि सापकोटाले चीनलाई दुई जोडी एकसिंगे गैँडा दिने निर्णय गरेका थिए । उनले २७ असार ०७३ को मन्त्रिपरिषद्बाट गैँडा उपहार दिने निर्णय स्वीकृत गराएका थिए । गत २७ पुस ०७२ मा तत्कालीन वनमन्त्री सापकोटाले चीन भ्रमणका अवसरमा चिनियाँ वनमन्त्री चाङ च्याङलोङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । भेटवार्तामा चाङले नेपालसमक्ष एकसिंगे गैँडा विशेष उपहार मागेका थिए । त्यही चाहनाका आधारमा गैँडा उपहारको प्रस्ताव मन्त्री सापकोटाले मन्त्रिपरिषद्मा गराएका थिए ।